စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - Djs, Vjs များအတွက် Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, နိုက်ကလပ် 2019
သင် Nye COUNTDOWN ထုတ်ကုန်များဝယ်ယူရန်နိုင်ရန်အတွက်နောက်လိုက်ဖတ်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
မတိုင်မီ Creative Audio / Video ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုရန်ဤသဘောတူညီချက်သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ , အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ဖုန်း VIA မိန့်, FOR မှတ်ပုံတင်ဖို့အသုံးပြုခြင်း, သို့မဟုတ်အခြားကို Audio / Video PRODUCTION ကိုရယူသုံး, သို့မဟုတ်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို သိ. သမျှသောစကားတို့ကိုမဆိုထုံးစံ၌, သင်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ပါတီလာဖှ, ဒီနည်းကိုသဘောတူညီချက်နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီအသိအမှတျပွုဖွငျ့ ဒီနည်းကိုသဘောတူညီချက်များနှင့်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်နှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဤနေရာတွင်လိုက်နာရသဘောတူညီ။ ဒီနည်းကို Creative Audio / Video PRODUCTION တစ်ခုတည်းသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်, disc ဂျော်ကီ, Consultation, တံဆိပ်များ, ဟိုတယ်များ, နိုက်ကလပ်, အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်များ, မြှင့်တင်ရေးတွေနဲ့တခြားအလားတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ် ENTITY ဖို့ကမ်းလှမ်းရအောငျ။ အကြောင်းတစ်ခုခု, သင်တို့လက်ခံမဒီနည်းကိုသဘောတူညီချက်အပေါငျးတို့သစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသဘောတူ, လျှင်, REGISTRATION / Order PROCESS ကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု, Creative Audio / Video ထုတ်လုပ်မှု, သို့မဟုတ်မည်သည့်တေးဂီတ, စာသားသို့မဟုတ် Access OR အသုံးမပြုပါ တစုံတမျိုး IN THE Creative Audio / Video ကုန်များမှတဆင့်ရရှိနိုင်သောအခြားပစ္စည်းများ။
သင်တင်းကြပ်စွာ KILLERSPOTS.COM, Inc & NYECOUNTDOWN.COM, LLC ကထုတ်လုပ်ဆိုအားလုံးနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲမျှဝေခြင်းသို့မဟုတ်အပ်လုဒ်တင်သူအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram သို့မဟုတ်အခြားမျှဝေတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ & FTP site ပေါ်ကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ License ဦးစီးဌာနမှရေးသားထားသောမှတ်တမ်း Express လျှင်။
အားလုံးဗီဒီယိုများကိုမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်ချိုးဖောက်သိရှိနိုင်ဖို့ watermarked ပါပြီ။ အားလုံးချိုးဖောက်မှုများလိုက်ပါလိမ့်မည် & အနက်ရောင်စာရင်း & အနာဂတ်ဝယ်ယူမှုအနေဖြင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုအဆုံးအသုံးပြုသူသကဲ့သို့သငျပေးနေပါသည်ထို့ကြောင့်မျှအားဖွငျ့, ပြန်ထုတ်ပေးပြုပြင်မွမ်းမံ, အဆင်ပြေအောင်, မှတဆင့်ကူးစက်သော, ရောင်းငှား, ငှားရမ်း, လိုင်စင်, လွှဲပြောင်း, ဖြန့်ဝေ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုတတိယပါတီများမှမှထုတ်ပေးရပါမည် သို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။
ဤသည်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများကကယ်နှုတ်တော်မူ၏အကြောင်းအရာလက်ခံရရှိတစ်နည်းလမ်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းနိုင်ရန်အတွက် created နှင့်ကုမ္ပဏီများကအတည်ပြုခံရဖို့တစ်ဦးချင်းအကောင့်လိုအပ်သည်။ Account တစ်ခုချင်းစီသာအကောင့်ကိုဖန်တီးခဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကအသုံးပြုခံရဖို့အခွင့်အာဏာသည်။ အဘယ်သူမျှမအခြေအနေမျိုးမှာအကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသောအသုံးပြုသူတစ်ဦးနှင့်ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့်မျှဝေသို့မဟုတ်အသုံးပြုရမည်အကောင့် disabled အဘို့အခိုင်ခိုင်လုံလုံ, အအကောင့်ကိုပိတ်ပစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပြစ်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုအခြားသူတစ်ဦး / entity ရန်သင့်တဦးချင်းအကောင့် ID ကိုရရှိနိုင်အောင်လည်းပါဝင်သည်။
သငျသညျကုမ်ပဏီဟာကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုအပေါင်းတို့နှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများဆက်စပ် လိုက်. ၏သီးသန့်ထိန်းချုပ်မှုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းဝန်ခံ။ အဆိုပါကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်ရေးမှတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အကြောင်းအရာပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်က၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပါဘူး။ အဖြစ်ဖော်ပြဤနေရာတွင်ပေး မှလွဲ. သင်တို့ရှိသမျှသည်အခွင့်အရေးများဖော်ပြ hereunder ခွင့်ပြုမပြုမူပိုင်ခွင့်, မူပိုင်ခွင့်, ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များဒါမှမဟုတ်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှလေးစားမှုနှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုမ္မဏီသိုက်မှမဆိုအခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်လိုင်စင်ခွင့်ပြုမထားပေ။ အဆိုပါကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြင့်ကာကွယ်ထားကြောင်းကိုစီးပွားဖြစ်နှင့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆံ့။
သင့်အနေကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှု၏မည်သည့်မိတ္တူ, မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်နှင့် / သို့မဟုတ်မူလကကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုပေါ်တွင်ပေါ်လာသောအခြားစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများသတိပေးချက်များကနေဖယ်ရှားပစ်ရန်မဟုတ်သဘောတူသည်။
သင်, decompile disassemble, decrypt, ဘာသာပြန်ဆို, ပြင်ဆင်ရန်ကနေလက်ရာများဖန်တီး extract သို့မဟုတ်အင်ဂျင်နီယာ reverse ဒါမှမဟုတ်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုပြန်လည်ရောင်းချရန်, ဒါမှမဟုတ်ကြိုးစား, ဒါမှမဟုတ်, ထိုအထက်ပါမဆိုလုပ်ဖို့အခြားသူတွေအထောက်အကူပြုဖို့မသဘောတူသည်။
သင်က express ကိုကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ် Non-စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, မျိုးပွားဖြန့်ဝေ, ဖြန့်ဖြူး, ရောင်းချ, တတိယပါတီများမှမှမရရှိနိုင်ပါစေ, သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုဤကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုဖြန့်ဝေပါသို့မဟုတ် Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှု exploit မှမဟုတ်သဘောတူ Company ၏။ မဆိုဤကဲ့သို့သောခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဖြန့်ဖြူးအရေးယူသင်လုပ်ရပ်ချိုးဖောက်နှုန်းအထိတရာငါးဆယ်-တထောင်ဒေါ်လာ ($ 17) ၏ဒဏ်ငွေအပြစ်ပေး, တကာဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောအကငျြ့ဘို့ထိုက်စဉ်းစားစေခြင်းငှါအရာအဘို့ 106 USC ပုဒ်မ 150,000 အောက်မှာဖက်ဒရယ်မူပိုင်ခွင့်တရား၏ချိုးဖောက်မှုရှိပါသည်။
အဆိုပါကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်ရေးမှတဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျော်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ကုမ္ပဏီများကလိုင်စင်ရကြသူတတိယပါတီများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာမူပိုင်ခွင့်နှင့်အခြားအသိဉာဏ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ အကြောင်းအရာ, ပြသရာတွင်အသုံးပြုလျက်, content တွေကိုရရှိနိုင်ပါလုပ်သာဒီသဘောတူညီချက်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုရန်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများကသာကစားစေခြင်းငှါ၎င်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သင်သည်မည်သည့်ချိုးဖောက်မှုအသုံးပြုမှုကိုကဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာ privacy ကိုရန်သင့်အခွင့်အရေးများအဆုံးသတ်ခြင်းမည်ကိုလည်းပြည်နယ်အောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဥပဒေရေးရာတာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ၎င်းမူပိုင်ခွင့်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရရှိသည်အခြားသီးသန့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ငြိစွန်းခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးထုံးစံ၌အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ဖို့မသဘောတူ သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒ။ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမျိုးပွား, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ငှားရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်အသံကအသံသွင်းနှင့် / သို့မဟုတ် 17 USC ကဏ္ဍများ 501, 506 အောက်မှာကတခြား protected အကျင့်ကိုကျင့်၏ဒစ်ဂျစ်တယ် transmission အတွက်ပြင်းထန်အရပ်ဖက်နှင့်ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ်ပေးပါသည်။ မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်အကျင့်ကိုကျင့်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမိတ္တူပြုလုပ်ခြင်းကိုသင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလထိုက်ကျင်းပစေခြင်းငှါအရာအဘို့ခိုးယူရှိပါသည်။ (P2P) သည်ကွန်ယက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကျင့်ကိုကျင့်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအပ်လုဒ်တင်အခြားသောနည်းလမ်းများကိုလည်းမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုပါဝငျ Peer မဆိုရွယ်တူချင်းအပေါ်မရရှိနိုင်ပါအကြောင်းအရာမဆို Making ။ ဤသည်သဘောတူညီချက်ဟာကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်ရေးမှတဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုမူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အသိပေးစာပါဝငျနှင့်မည်သည့်တရားမဝင်အသုံးပြုမှုအထိတရာငါးဆယ်-တထောင် ($ တစ်ဒဏ်ငွေအပြစ်ပေးတဲ့ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်တကာမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုတွေ့ရှိချက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်စေမည် လုပ်ရပ်သို့မဟုတ်အခြားပြင်းထန်အရပ်ဘက်သို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုတာဝန်ယူမှုကိုချိုးဖောက်နှုန်း 150,000) ဒေါ်လာ။
သင်တို့ရှိသမျှသည်အကြောင်းအရာသည်သင် traceable ဖြစ်တယ်, သင်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်အထက်နှင့်အညီမြေတပြင်လုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်အကြောင်းအရာမဆိုကူးယူသို့မဟုတ်တရားမဝင်ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးဘို့တာဝန်ယူလိမ့်မည်ဟုသောပုဂ္ဂိုလ်ရေး ID နဲ့ watermarked ကြောင်းနားလည်ပါသည်။
term ။ This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.
အာမခံ၏ခွင။ You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness foraparticular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.
တာဝန်ဝတ္တရားများကန့်သတ်။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကခွင့်ပြုသောအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိကိုမကုမ္ပဏီက၎င်း၏လိုင်စင်ရ, ပေးသွင်းသူများ, မိတ်ဖက်, affiliates သို့မဟုတ် Third-party ဝန်ဆောင်မှုပေးသင်သို့မဟုတ်မဆိုတိုက်ရိုက်သွယ်ဝိုက်, ဖွစျပှား, အထူး, စံပြ, ပြစ်ဒဏ်ခတ်သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်မည်သည့်တတိယပါတီခံထိုက်ပေ၏ဖြစ်ရလိမ့်မည် မသက်ဆိုင်လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံဒါမှမဟုတ်အရေးဆိုမှုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီခဲ့ဖြစ်စေမ အခြေခံ. ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်ထဲကသို့မဟုတ်ဤသဘောတူညီချက်ဒါမှမဟုတ်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ပေါက်မဆိုထုံးစံ၌ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုအခြားပုံစံ, ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကြံပေးခဲ့သည်။ တချို့ကတရားစီရင်မှုဖွစျပှားသို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှု၏န့်အသတ်သို့မဟုတ်ဖယ်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အထက်ပါကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ချန်လှပ်အချို့ကိုသင်ကလျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြန်ကြားရေးအသုံးပြုခြင်း။ သငျသညျဤဥပဒေတစုံတကုမ္ပဏီအတွက်ကုမ္ပဏီမှသတင်းပေးပို့သည့်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကနေဆင်းသက်လာမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုစီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ် Non-စီးပွားဖြစ်သော်လည်းကောင်းရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ကိုရွေးကောက်ပြီးသုံးစွဲဖို့ကုမ္ပဏီခွင့်ပြုချက်မှပေးသနားတော်မူ။
အပြောင်းအလဲများ။ ကုမ္ပဏီကဒီသဘောတူညီချက်ပြုပြင်မွမ်းမံဖို့နဲ့ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုအပေါ်အသစ်သို့မဟုတ်အပိုဆောင်းအသုံးအနှုန်းများသို့မဟုတ်အခြေအနေများစည်းကြပ်ဖို့အခြိနျမရှေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့သောပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုချက်ချင်းထိရောက်ဖြစ်နှင့်ဤသဘောတူညီချက်သို့ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုသင်၏ဆက်လက်အသုံးပြုမှုကိုလက်ခံမှု သိ. ယူဆလိမ့်မည်။
လျော်ကြေး။ You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred asaresult of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.
စီရင်ပိုင်ခွင့်မှဥပဒေနှင့်သဘောတူညီချက်၏ရှေးခယျြမှု။ ဤသဘောတူညီဥပဒပြဌာန်းချက်၎င်း၏ပဋိပက္ခများနှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, အမေရိကန်, ၏ပြည်နယ်၏ဥပဒေများကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိ၏ သငျတို့သဤဥပဒေပုသီးသန့်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့်ထဲကပေါ်ထွက်လာသောဒါမှမဟုတ်ကို Creative ပေး Audio / Video ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးအငြင်းပွားမှုများမှလေးစားမှုနှင့်အတူ Clermont ကောင်တီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, USA တွင်တည်ရှိသောဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်တရားရုံးများတွင်နေရာသဘောတူသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျဤဥပဒေပုသီးသန့်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့်ကျွန်တော်တို့ (သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ affiliates) ဆန့်ကျင်သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့စတင်မဆိုအရေးယူဘို့ထိုကဲ့သို့သောတရားရုံးများတွင်နေရာသဘောတူသည်။
တစျခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်။ This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed inamanner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constituteawaiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.
အားလုံး CUSTOM မှာယူမှုတွင်အလုအယက်ကြေးမပါဘဲအပေါ်အချိန်ပေးပို့အာမခံချက်မှမွန်းတည်, EST ကို AT Saturday, ဒီဇင်ဘာ 27, 2018 BY စေရမည်။
ဤနောက်ဆုံးရက်တွင်အပြီးအားလုံးအမိန့်ဟာ Rush ခပေါင်းမဆိုအမြန် FedEx စွပ်စွဲချက်များဖြစ်ပေါ်လာစေမည်။
အားလုံး Sales နောက်ဆုံးကြသည်! NO ပြန်အမ်းငွေပေးလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါ မှလွဲ. ။
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်ထောက်ခံမှုရှိပါက: ကျေးဇူးပြုပြီး e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!
*** လျှော့ ALERT ***
တစ်ဦးကဗွီဒီယိုကသင်၏ Nye နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲယူ ကျေးဇူးပြု. လှုပ်ရှားမှုအတွက်မှာနေထိုင် this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.
ဒီမှာ Upload လုပ်ပါ: http://bit.ly/ClientUpload